Majallada Caalamiya oo Sheegtay in Madaxweyne Muuse Biixi Taabogelinayo Iskaashiga Somaliland iyo UAE | Hangool News
Majallada Caalamiya oo Sheegtay in Madaxweyne Muuse Biixi Taabogelinayo Iskaashiga Somaliland iyo UAE
Hargeysa (Hangoolnews.com)- Madaxweynaha la doortay Md. Muuse Biixi Cabdi oo ah kii shanaad ee ay yeelato Somaliand, tan iyo markii ay ka go’day Soomaaliya sannadkii 1991-kii, ayaa bog cusub u furaya iskaashiga ka dhexeeya Somaliland iyo Imaaraadka carabta (UAE).
Siday baahisay majaladda caanka ah ee The National ee ka faaloota arrimaha khaliijka carabta iyo bariga dhexe, ayaa warbixin dheer oo ay daabacday ciwaan uga dhigtay “Madaxweynaha cusub ee Somaliland wuxuu xoojinayaa cilaaqaadka ay la leeyihiin UAE”, waxaana soo turjumay Tifaftiraha Guud ee Wargeyska Dawan, Cumar Maxamed Faarax.
Waxaanu warkaasi u dhignaa sidan:-“Madaxa siyaasadda ijtimaaciga ah u qaabilsan xisbal-xaakimka KULMIYE, Prof. Axmed Ismaaciil Samatar, ayaa u sheegay majallada The National in madaxweynaha doorashada ku guulaystay, Md. Muuse Biixi Cabdi uu tixgelinayo horusocodka laga sameeyay iskaashiga ay la leeyihiin UAE, isla markaana uu u heellan yahay inuu taabogeliyo cilaaqaadkii jiray ee u dhexeeyay labada dal.
Heshiiskani wuxuu ka dhashay kadib markii DP World oo Imaaraadka laga leeyahay ay la saxeexatay Somaliland heshiis soddon sannadood socon doona, oo lagu horumarinayo dekedda Somaliland. Bishan, DP World waxay sheegtay inay ka samaynayso Somaliland aagga suuqa xorta ah oo la mid ah ka ay ka hirgelisay marsada Jebel Ali ee Dubia.
Madaxii goobjoogayaashii caalamiga ahaa ee doorashadii madaxtooyada Somaliland, Dr Michael Walls,ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Somaliland uu kor u sii qaadi doono xidhiidhka Somaliland iyo Imaaraadka carabta, maadaama oo aanu ka noqonaynin heshiisyadii ay gashay dawladdii ka horraysay. Waxa kaloo uu intaas ku daray in fulinta heshiisyada iyo iskaashiga labada dhinac la meel marin doono maadaama oo ay la soo dhaafay marxaladii doorashada.”
Xigasho:— Gudgude.com 2017